Echiche maka ịchọ mma mbara ala na ụlọ elu | Icho mma
Ime ụlọ iri nri
Echiche maka ịchọ mma mbara ala na ụlọ elu
Maria onyekwere | | Terra
Inwe teres bụ okomoko, mana a terrace n'elu ụlọ na-akpali anyaụfụ. Ma ọ bụ na mbara ala ndị a na-abụkarị nnukwu ma na-enwe ọmarịcha nzuzo. Ị nwere chi ọma ka ị nwee ike ịnụ ụtọ otu? Mgbe ahụ ị nwere ike ịmasị echiche ndị a maka ịchọ mma terraces na ụlọ elu nke anyị na-ekerịta gị taa.
The teres na-aghọ a ndọtị nke ụlọ anyị na-enye anyị ohere ọzọ iji zuru ike, kpọọ ndị ezinụlọ na ndị enyi ka ha rie ma ọ bụ na-akọ ubi. Ọ bụrụ na ị na-etinyekwa ihe mkpuchi, ị nwere ike iji ha mee ihe site na mmiri ruo n'oge oyi ọzọ. Jiri ya mee ihe!
1 Kọwaa mpaghara dị iche iche ma jikọta ha na ime
2 Jiri pavement gwuo egwu
3 Na-enye ndò
4 Gbatịkwuo echiche
5 Họrọ arịa ụlọ anaghị arụ ọrụ
6 Jiri osisi mara mma
Kọwaa mpaghara dị iche iche ma jikọta ha na ime
Ghọta oghere nke mbara ala gị n'ozuzu wee kwere na ya mpaghara dị iche iche jikọtara ọnụ. Edokwala arịa ụlọ niile n'otu ebe ma ọ bụrụ na mbara ala buru ibu, gbanwee oghere ndị ahụ ka ị wee nweta mbara ala n'usoro nke nwere akụkụ nke ị nwere ike iji mee ihe n'oge dị iche iche.
Mepụta mpaghara abụọ, otu iji zuru ike na otu iri nri. Kesaa ha na-aṅa ntị na ọpụpụ ị nwere n'ụlọ. Debe ebe obibi n'akụkụ ọnụ ụzọ nke jikọtara ọnụ ụlọ ahụ na mbara ala iji zuru ike. Na n'akụkụ kichin, tebụl iri nri n'èzí ka ọ dịrị gị mma ịbanye na nri.
Mee akụkụ-eme ka o kwe omume ịmepụta a ụlọ iri nri na kichin n'èzí? Ọ bụrụ na ị na-eji ohere nke teres n'oge okpomọkụ, echela banyere ya! Ihe niile ọ na-ewe bụ arịa ụlọ ole na ole, ebe a na-eri anụ arụrụ arụ na ebe a na-arụ ọrụ na sink iji mepụta akụkụ nke ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe n'oge okpomọkụ.
Terrace ahụ ọ dị obere ma ị nweghị ohere maka ihe niile? Mgbe ahụ ị ga-ebute ụzọ Ka ha na-aka akara igodo iji chọọ obere mbara ala anyị kesara gị n'oge na-adịbeghị anya, ị chetara ha?
Jiri pavement gwuo egwu
Mepụta mkpọda ugwu wee mee mgbanwe na ihe onwunwe Iji ihe ndị a eme ihe bụ atụmatụ dị ukwuu na mbara ala buru ibu iji mee ka oghere ahụ dịkwuo ike ma mara mma. Otú ọ dị, anyị na-aghọta na nke mbụ na-adịghị mgbe nile bara uru ma ọ bụ ndụmọdụ, ma n'ihi na terrace bụghị nnọọ nnukwu, n'ihi na anyị na-adịghị a nnukwu mmefu ego ma ọ bụ n'ihi na ụmụaka ma ọ bụ ndị nwere nsogbu njem na-ebi n'ụlọ anyị chọrọ ka anyị nwee ike. na-enwe onwe ya. nke oghere a.
Itinye ego na pavement dị mma, n'aka nke ọzọ, bụ oke nhọrọ mgbe niile. Họrọ otu nke na-eguzogide ma mgbanwe okpomọkụ yana ihu igwe na-adịghị mma na obere mmezi. Chọpụtakwa mee ka ọ ghara ịda iji zere ihe ọghọm.
Ala seramiiki Ha bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka imeghe mbara ala, ma ọ bụghị naanị otu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata uru na ọghọm nke ihe ọ bụla Anyị na-akpọ gị òkù ka ị gụọ otu isiokwu anyị bipụtara ugbu a otu afọ gara aga. Were otu ma ọ bụ abụọ wee jikọta ha na ahihia arụrụ arụ iji weta ìhè na ịdị ọhụrụ na oghere a dị n'èzí.
Oghere ụlọ ndị dị n'uko ụlọ na-enweta ọtụtụ awa nke ìhè anyanwụ kpọmkwem, yabụ ị ga-emerịrị ya hazie ihe okike nke mpaghara onyinyo. Ebe kpuchiri ekpuchi ga-enye gị ebe obibi mara mma karịa n'oge okpomọkụ iji zuru ike ma ọ bụ rie nri. A pergola bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma maka nke a, karịsịa nke aluminom n'ihi nguzogide ha, mana ị nwekwara ike ịkụ nzọ na ngwọta dị ọnụ ala dị ka mkpuchi mkpuchi na ụgbọ mmiri.
Ọ bụrụ na ị na-enwe ọmarịcha echiche na mbara ala gị, egbochila ha! Ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ ndị ọzọ dị nso ma ọ bụ na ị ga-elekọta nzuzo gị, jiri echiche ndị ahụ mee ihe site na ịwụnye. nchekwa enyo rails. Debe ebe izu ike chere ihu n'èzí ka ị ghara ịgbaghara ihe ọ bụla.
Họrọ arịa ụlọ anaghị arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmepụta mpaghara abụọ ma ọ bụ ọbụna atọ na mbara ala, ọ ga-adị mkpa ịhọrọ ngwá ụlọ dị mma. A ngwá ụlọ e mere maka ihe ndị ahụ nke na-ebelata nlekọta ya ma ghara ịmanye gị ịnakọta ya n'oge oyi. Ngwongwo igwe, eriri sịntetik na akwa teknụzụ maka eji eme ihe n'èzí na nzọ dị mma, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị ga-emepụta ebe kpuchiri ekpuchi, ị nwekwara ike họrọ arịa ụlọ nke osisi teak, achara ma ọ bụ eriri eke.
Sofas modular Ha bụ ihe ọzọ dị mma iji chọọ ụdị ohere a mma, ebe ị nwere ike igwu egwu na modul iji nye ha ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndị ọbịa ị nwere ike iji ha niile dị ka poufs, ma ọ bụrụ na ị chọrọ izuike ị nwere ike dee na chaise longue armchairs ma ọ bụ anyanwụ loungers modul.
Ịchọghị ịchọta ebe ị ga-echekwa ihe nkwụ gị niile n'oge oyi? Nzọ na oche ma ọ bụ sofas na mpaghara ezumike na nchekwa. Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ nzọ n'elu ngwá ụlọ ndị a na-akwadoghị maka ihe ndị ahụ, họrọ ha na-atụgharị ka ọ dịrị gị mfe ịnakọta ha n'akụkụ ebe nchekwa nke mbara ala ma kpuchie ha. Enwere nhọrọ mgbe niile maka ịchọ mma nke mbara ala ndị a na ụlọ elu.
Jiri osisi mara mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta nzuzo, tinye nnukwu ite na ogologo osisi n'akụkụ okporo ígwè. Emela ya n'ụzọ ziri ezi, gaa na-emepụta otu osisi nke ụdị dị iche iche ebe a ka ha na-akpụzi oghere ahụ n'ụzọ ọzọ. Gaa maka osisi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adịghị mma iji mepụta obere oasis yana maka obere ite ifuru na ụlọ ezumike ma ọ bụ ebe iri nri iji tinye agba.
Ọ masịrị gị echiche anyị maka ịchọ mma mbara ala n'uko ụlọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Oghere » Terra » Echiche maka ịchọ mma mbara ala na ụlọ elu
Jiri Vinyl chọọ ụlọ gị mma
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ala vinyl iji chọọ ụlọ gị mma. Echefula na nnukwu nnakọta a.
Vinyls kacha mma
Otu esi eme ogwe Japanese maka windo gị
Uru nke resin epoxy dị ka ihe mkpuchi ala
Nweta isiokwu kachasị na mma na ụlọ.